Saraakiil Ka Tirsan Booliska Somaliland Oo Ku Dhaawacmay Shil Baabuur | Somaliland.Org
Saraakiil Ka Tirsan Booliska Somaliland Oo Ku Dhaawacmay Shil Baabuur
January 6, 2013	Hargaysa (Somaliland.Org) Laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska Somaliland iyo saddex askari oo kale oo midkood uu ka tirsan yahay ciidamada qaranka ayaa caawa ku dhaawacmay shil baabuur, ka dib markii baabuurkii ay wateen uu kula qalibmay meesha la yidhaahdo maqaaxida Inanta oo ka tirsan degmada Dacar-Budhuq oo u dhaxaysa Hargaysa iyo Berbera.
Saraakiishan oo ka yimid magaalada Oog ee gobolka Sool halkaasi oo ay u tegeen qiimaynta derejooyinka ciidamada oo uu taliska guud ee ciidamadu u diray, iyada oo wakhtiga uu shilku ku dhacayna ay u soo socdeen magaalada Hargaysa.
Saraakiishan iyo askartan oo ay magacyadoodu kala yihiin Daahir Cali Wacays oo ah hogaanka dhismaha ee ciidanka booliska ayuu dhaawacu ka soo gaadhay lug iyo gacan iyo Maxamed Jaamac Dhacdoon oo ah ku xigeenka hogaanka Saadka booliska ayaa isna ka dhaawacmay lug iyo feedhaha .
Waxa kale oo shilkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo uu midkood ka tirsan yahay ciidanka qaranka kaasi oo la sheegay in uu meel dhexe ka soo raacay baabuurka ay wateen saraakiishan iyo askartaasi, dhamaanba saraakiishan iyo askartaasi ayaa dhaawacooda la geeyay cusbitaalka guud ee Hargaysa, halkaasi oo lagu dawaynayo.
Warku waxa uu intaasi ku in dhaawaca nimankaasi uu ugu culus yahay askariga ka tirsan ciidanka qaranka.
Baabuurkan la qalibmay xubnahan isugu jira saraakiisha iyo askarta oo ka mid ah gaadiidka ciidanka booliska Somaliland.
Previous PostAgaasimaha warfaafinta oo kulan la yeeshay wakiilka itoobiya u fadhiya SomalilandNext PostOgaysiis: Guul Group	Blog